मनीषा उता चैँ किन झ्याप? | TGuff
फेसबुकमा सम्बन्धको तितो पोखेपछि भारतीय मिडियामा मनीषा कोइरालाको डिभोर्स भइसकेको खबर फैलियो। एक साता अघि काठमाडौं आउँदा चै उनले यो कुरा स्वीकारिनन्। सम्राटसँगको सम्बन्ध पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रहेको उनको भनाइ थियो। यता ध्यानको हेडलाइन बनेकी मनीषा भारतमा चै सधैँ मदिराको उन्मादका कारण मिडियामा छाउने गरेकी छन्। मनीषा किन उता चै ‘वाइल्ड’ बन्छिन् ? स्वच्छन्द स्वभावका कारण ? अथवा मद्यपान उनको लत नै हो?
वास्तविकता जे भए पनि ह्या आएका बेला यसपाल पनि उनी ओशो तपोबन पुगेर ध्यानमा बसिन्। अल्कोहल ‘नाइ’ भन्न नसक्ने मनीषाको मन ध्यानले कतिबेर शान्त पार्न सक्छ? यो पक्ष ध्यान गुरू र मनीषाले मनन् गर्या छन् कि छैनन् होला?
के गर्नु रक्सीको जातै यस्तै हो… : यस्ती देखिन्छिन् झ्याप भएपछि मनीषा
यता तपोवनमा: पहिला पनि तपोवन पुगेकी थिइन् मनीषा।
उता नाइट क्लबमा झ्याप : मदिरामा लठ्ठ मनीषालाइ उद्दार गर्दै सहयोगी (तल)।